India oo laba boqol oo milyan ugu deeqaysa Amisom, balaayiin kalena Afrika ugu talo gashay. – Radio Daljir
India oo laba boqol oo milyan ugu deeqaysa Amisom, balaayiin kalena Afrika ugu talo gashay.
Addis Ababa, 24 May – Dowladda India oo isku dayaysa kobcinta iyo adkaynta xidhiidhada dhaqaale iyo siyaasadeed ee ay la wadaagto qaaradda Afrika ayaa sheegtay in ay 5 bilyan oo doollarka maraykanka ah ay siinayso qaaradda Afrika saddexda sannadood ee soo aaddan, taasoo wajigeeda hore qayb ka gaadhi doonta ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika (Amisom) ee Muqdisho jooga.
Ra?iisal wasaaraha India Manmohan Singh oo ka qayb galaya shir lix maalin leh oo ku astaysan xidhiidhka India iyo Afrika oo ka furmay shalay (Isniin) magaalada Addis Ababa ayaa sheegey in dalkiisa oo muhimad wayn siinaya xidhiidhka dhaqaale iyo siyaasadeed ee uu la wadaago Afrika, uu saddexda sannadood ee soo aaddan ku deeqayo 5 bilyan oo dollar, taas oo qayb ka ahaan doonto la dagaallanka jahliga, faqriga, xanuunnada iyo horumarinta mashaariic tababar oo laga fulin doono dalal badan oo qaaradda Afrika ka mid ah.
Ra?iisal wasaare Manmohan Singh waxa uu qudbaddiisa si gaar ah ugu qeexay goobaha lagu kala bixin doono biyanka dollar ee ugu horreeya adduunkaasi dhaqaale. Laba boqol oo milyan oo ka mid ah bilyankan ayaa lagu taageeri doonaa ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee Amisom, $300 milyan waxaa lagu samayn doonaa macaahid tababar oo qaaradda Afrika laga hirgelinayo, halka $700 ee milyan ee kalena loogu talo galay hagaajinta dhabbaha xadiidka ee tareenka Itoobiya iyo Jibuuti.
India oo ah awoodda saddexaad ee dhaqaalaha qaaradda Asia, waxa ay u xusul duubaysaa in ay kursi joogto ku yeelato golaha joogtada ah ee Qarmada Midoobay, waxaa kale oo ay dalka Shiinaha kula baratamaysaa xidhiidhada saaxiibtinimo, dhaqaale, iyo siyaasadeed ee uu la leeyahay qaaradda Afrika.